နံပြားဖို တစ်ခုအကြောင်း | Climb O'Clock
← (RFID) နဲ့ ပက်သက်လို့ သင့်ရဲ့ ဒေတာတွေ တွေကို ဘယ်လိုထိမ်းသိမ်းမလဲ
ဝိတိုရိယ နံရံစာ →
တစ်နေ့ကညက ကမ္ဘာ့ဖလား ဗိုလ်လုပွဲ နဲ့ ………..
အစ္စရေး နဲ့ ပါလက်စတိုင်း (ဟားမား) ရဲ့ မပြီးတဲ့ စစ် ၊……………
စကားမစပ် ဒူဘိုင်း စက်မှုနယ်မြေက နံပြားဖို တစ်ခုအကြောင်း စားမြုံ့ပြန်ခြင်း ….
“Portrait of Afghani baker DIP1” as seen at the night of World Cup Final 2014, July , 14 #worldcup #dubai #dubai_investment_parks #germany #fifa2014 #football #afghan #nann #bread #bakery they are supporting Germany football team while baking their Nann (Afghani-bread), (I find it interesting though I’m notafootball fan, get this pic on my way back from Deira, dxb downtown to my place in DIP2 )
အဲ့ဒီနေ့ညက ဘောပွဲရှိမှန်း တစ်ကယ်မသိတာပါ…
မြို့ထဲက အပြန် ထုံးစံအတိုင်း အိမ်ကို တန်းရောက်တဲ့ မှတ်တိုင်နဲ့ နီးတဲ့ Bus ၂ဆင့်မစီးပဲ ၊ တစ်ဆင့်တည်း ဖြောင့်ဖြောင့်သွားပေမဲ့ မှတ်တိုင်က နေအိမ်ကို မိနစ် ၂၀လောက် ထပ်သွားရတဲ့ လမ်းကြောင်းက bus ကားကိုစီးခဲ့ပါတယ်၊
ကားပေါ်က ဆင်းပြီး တော့ အိမ်ကို အပြန်လမ်းမှာ လမ်းမကြီးအတိုင်းမပြန်ပဲ အလုပ်သမားတွေ ဆိုင်တန်းတွေရှိတဲ့ ဘက်ကနေ ပတ်ပြန်ပါတယ် ၊လမ်းတွေ လျှောက် ရင်း နဲ့ နံပြားဖို တစ်ခုအနားကို အရောက်မှာ စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေ့ပါတယ် ၊
နံပြား ဖုပ်သမားတွေ အားလုံးဟာ ဂျာမနီ ဘောလုံးအသင်း ဂျာစီကို ဝတ်ထားကြတာတွေ့တော့ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ချင်စိတ်ပေါက်လာပါတယ် ၊ ဒါနဲ့ အိတ်ထဲမှာ ပါတာက fuji hs25 bridge လေးရယ် ပြီးတော့ GoPro (ဘယ်သွားသွားသယ်နေကြတွေပါ ) ၊
ဒါနဲ့ low profile ဖြစ်အောင် GoPro နဲ့ရိုက်မယ် ဆိုပြီး သူတို့ကို တတ်သလောက် မှတ်သလောက် အာရေးဘစ် ရော အူရဒူဘာသာနဲ့ကော နှုပ်ဆက်ပြီး လက်ဟန်ခြေဟန့်ကော နဲ့ ခွင့်တောင်းကြည့်ပါတယ် ၊
အင်္ဂလိပ်စကား နည်းနည်း နားလည်ပုံရတဲ့ တစ်ယောက်က သူတို့ဟာ အာဖဂန် နစ္စတန်က ဖြစ်ကြောင်း ၊ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ချင်ရိုက်လို့ရကြောင်းပြန်ပြောပါတယ် ၊ပြီးတော့ သူတို့ ပုံအရိုက်ခံဖို့ pose ပေးပါတယ် ၊
ကျွန်တော်က ဓာတ်ပုံ ဆရာလည်းမဟုတ်ပါဘူး
သူစိမ်းတွေကို ဘလိုင်းကြီးမရိုက်ချင်တာမို့ ( တတီတီနဲ့ zoom ဆွဲမရတဲ့go pro နဲ့ရိုက်မှာမို့တစ်ကြောင်း ) ခွင့်တောင်းရိုက်တာ ၊
သူတို့က ဆိုင်ရှေ့မှာ တန်းစီရပ်ပေးတော့ ကိုယ်မှတ်တမ်းတင်ချင်တဲ့ ပုံမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ် ၁ပုံရိုက်ပါတယ် ၊ ညစာစားပြီးပေမဲ့လည်း ဆိုင်က ရောင်းတဲ့ ပူပူ နွေးနွေး နံပြားလေး ၂ချပ်အားပေးရင်း နောက် ၂ပုံ စုစုပေါင်း ၃ပုံ ရိုက်ဖြစ်ပါတယ် ၊
ပြန်ခါနီး သေချာ နှုပ်ဆက်ပြီး အိမ်ရောက်တော့online ပေါ်မှာ ကမ္ဘာ့ဖလား အကြောင်းပလူပြန်နေတာတွေ့ရပါတယ်၊ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော့ရဲ့ ရှားရှားပါးပါး ရလာတဲ့ camera ထဲက ပုံလေးတွေကို ပြန်ကြည့်တော့ သိပ်မကောင်းလှပေမဲ့
“ကမ္ဘာ့ဖလား ဗိုလ်လုပွဲ ညမှာ အာဖဂန်နံပြားဖိုက နံပြား ဖုပ်သမားတွေဟာ ဂျာမဏီ အသင်းကို အားပေးကြောင်း” ဆိုပြီး instagram/ facebook မှာ တင်လိုက်ပါတယ် ၊ crop တယ် ၊ အဖြူအမည်း ပြောင်းတယ် ဒီလောက်ပါပဲ။ ( ပုံက candid စစ်စစ်မဟုတ်ပေမဲ့ street ဖြစ်ကောင်းလောက်တယ် လို့ ကွကိုယ် တံဆိပ်တပ်လိုက်ပါတယ် )
ပြီးတော့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နဲ့ အဲ့ဒီညမှာ fb PM ကနေ ချက်ရင်း သူပြောတဲ့ အချက်က “:most of the Argentines are Jews,bro” တဲ့
၊အဲ့ဒီမှာ ခေါင်းထဲမှာ လင်းကနဲ တစ်ချက် ဖြစ်သွားပါတယ် ၊
အင်း ဟုတ်သားပဲ ၊
အစ္စရေး နဲ့ ပါလက်စတိုင်း ချနေတယ် ၊ ( အစ္စရေး က ဂျူး လူမျိုးတွေ/ အာဂျင်တိုင်းတွေ ကလည်း တော်တော်များများ ဂျူးပဲ / ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ ဂျူးတွေကို ဟစ်တလာ သတ်ခဲ့တယ် / အရှေ့အလယ်ပိုင်းက လူတွေက ဂျူးတွေအပေါ် ထားတဲ့ သဘောထား ၊………………………… စတာတွေအတွေးနယ်ချဲ့မိရင်း ကျွန်တော့ရဲ့ street photo လေးကပြောနေတဲ့ ( သို့မဟုတ် ) ကျွန်တော့ဘာကျွန်တော် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ယူတွေ့ရှိပြီးနောက် street photography ကို ပိုပြီး ရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုက်သွားပါတယ် )
ဒါဟာ တိုက်ဆိုင်မှုလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ၊
ကြိုးကြောင်း ဆင်ခြင်တွေ့ကြည့်ရင် ခုနပြောတဲ့ အခြေခံအကြောင်းရင်းတွေနဲ့ လည်း နေ့စဉ် လူမှုဘဝတွေမှာ တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း ဆက်နွယ်နေနိုင်ပါသေးတယ် ၊
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုတွေ ၊ ဘာသာရေး စစ်ပွဲတွေ ၊ ဘောပွဲ ရလဒ်တွေ မဟုတ်ပါဘူး ( ကျွန်တော် လူက လူကို လူလို့ပဲ မြင်ပါတယ် အထွေအထူး ပြောစရာမရှိပါ )
ကျွန်တော့ စားမြုံ့ပြန်လိုရင်းက street photography ကို ပိုပြီးချစ်သွားရတဲ့ အကြောင်းပါ …….ဘာလို့ဆိုရင် အဲ့ဒီညက လမ်းပေါ်ကနေ နောက်တစ်ခေါက်ပြန်မရတော့မဲ့ ကျွန်တော့ ဘဝရဲ့ ကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးနဲ့ ပက်သက်ဆက်စပ်နေတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ဖမ်းယူနိုင်လိုက်လို့ ပါပဲ။
“Afghani bakery in DIP1” as seen at the night of World Cup Final 2014, they are supporting Germany football team while baking their Nann (Afghani-bread), (I find it interesting though I’m notafootball fan, get this pic on my way back from Deira, dxb downtown to my place in DIP2 ) — at Dubai Investments Park.
…… (aphotograph saysathousand word ဆိုသလို ပုံကို ရှင်းပြစရာမလိုအောင် ရိုက်နိုင်တဲ့ အဆင့်မရှိတဲ့ အတွက် ညံ့တာကို အေးဆေးမနေပဲ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ၊ ….. ဓာတ်ပုံဆရာမဟုတ် ပေမဲ့လည်း ဝါသနာအရ အကောင်တွေ နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို မှတ်တမ်းတင်ဖို့ wildlife နဲ့ street photography တို့ကို ရှိတဲ့ ကင်မလာနဲ့ပဲ ရိုက်သွားဦးမှာ ဖြစ်ကြောင်း ၊ DSLR ရှိမှ ဓာတ်ပုံသင်တန်းတက်လို့ရမယ် ဆိုတာတွေ့တဲ့ အတွက် တေလေငပေ ကျွန်တော်ဟာ DSLR ဝယ်ဖို့ အစီအစဉ်မရှိ ပေမဲ့ ရှိတာနဲ့ ရိုက်မှာဖြစ်ကြောင်း…………….. ဒါပါပဲ ။ )
This entry was posted in Essay and tagged street. Bookmark the permalink.